Masangano Akazvimirira Oga Okumbira SADC Kuti Ipindire paNyaya yeSarudzo
Mbudzi 03, 2010
Masangano akazvimirira oga anoti akumbira kuita musangano nemunyori weSADC, VaTomaz Salomao, wekuti vakurukure zviri kuitika muZimbabwe. Izvi zvinotevera kutyisidzirwa kwakanyanya kwevanhu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF.
Asi VaSalomao vati havasati vawana tsamba iyi, kunyange hazvo vakazvipira kusangana nemasangano aya. MDC neChitatu yakati nhengo yeNational Executive Committee yeabato rayo nemhuri yavo, VaNorman Mabhena, vatiza musha nekutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori nevamwe vatsigiri veZanu-PF. MDC yakumbira mapurisa kuti apindire.
Zvinonzi vari kuti vanoda kupfudza VaMabhena vari kuti havana kufara kuti mhuri yavo yakaramba kuti hama yavo, mushakabvu Welshman Mabhena, vavigwe kumarinda epaHeroes Acre. VaMabhena vakashaya mwedzi wapera vakavigwa kuBulawayo.
KuMasvingo, MDC inotiwo kwemasvondo maviri apfuura, mapurisa ari kupfuvisa vashandi vepahofisi yavo achiti anoda mazita evanhu vose vari mudunhu reMasvingo. Mapurisa aya anoti anoda kuti izvi zviitwe chishanu chisati chasvika.
Mapurisa anonzi ati zvikasaitwa, achapinda mumahofisi aya nechisimba. KuZhombe, MDC inoti mumwe mutsigiri wayo, VaRaphel Mandoti, vari muchipatara mushure mekurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF.
Gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika, uye vari munyori wezvemitemo muZanu-PF, VaEmmerson Mnangagwa, uye Brigadier Douglas Nyikayaramba, vanonziwo vari kuti MDC haitongi kunyange ikakunda musarudzo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumapurisa, kanawo kuZanu-PF. VaDewa Mavhinga gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. VaMavhinga vanoti SADC inofanira kupindira panyaya yeZimbabwe.
Mapurisa, Vasori neVeChidiki veZanu-PF Vobatana Kumisa VaNgarivhume Kubvisa Marara kuMbare
Vakawanda Vanoti Mutemo Unofanira Kusimbaradzwa Kuti Usunge Vanoba Mari dzeHurumende Sezvo ZACC Isina Meno
Nhengo yeZanu-PF VaKereke Vakabatwa neMhosva Yekubata Chibharo Vopihwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Zimbabwe Human Rights Commission Inoti Nhomba yeCovid-19 Haifanire Kuita Zvekumanikidzwa Vanhu
Sangano reZimbabwe Vigil Romutsiridza Kuratidzira Kwaro paMuzinda weZimbabwe muLondon